Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington wuxuu maal-gelinayaa $ 1,437,500 si loogu taageero horumarinta dhaqaalaha - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington wuxuu maal-gelinayaa $ 1,437,500 si loogu taageero horumarinta dhaqaalaha
OLYMPIA, WA - The Guddiga Dib u Soo Nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington (CERB) waxay ansaxisay $ 1,437,500 oo deyn iyo deeqo ah oo loogu talagalay horumarinta kaabayaasha bulshada iyo daraasadaha suurtagalnimada dhaqaalaha ee lagu bartilmaameedsanayo kobaca ganacsiga iyo shaqo abuurka ee Port Port, Port of Douglas County, Island County, iyo magaalada Newport.
Gobolka Clallam - $ 1,105,000 oo deyn ah iyo $ 195,000 oo deeq ah Dekeddii xanaaqa oo loogu talagalay marin-biyoodka Maraakiibta Warshadaha. Mashruucan horumarineed ee soo socda wuxuu ka kooban yahay dhismaha Wajiga 1A ee Maraakiibta Warshadaha ee Marine Trades, oo ay ku jiraan xarun 18,500 dhudhun laba jibbaaran lagu raadsado. Dekeddu waxay qiyaaseysaa in mashruucu abuuri doono 250 shaqo shan sano gudahood. Lacagta CERB waxaa la mid ah $ 1,325,105 oo ah ilaha maxalliga ah.
Gobolka Douglas - $ 50,000 oo deeq ah Dekedda Degmada Douglas loogu talagalay Rock Island Adaptive Reuse Feasibility Study. Daraasaddan suurtagalnimada ah waxay diiradda saareysaa la qabsiga laba dhismeyaal warshadeed oo xiran oo ku yaal wabiga Columbia ee xaruntii hore ee Mareykanka ee 'Silicon Smelter' si dib loogu isticmaalo Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 200,000 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Island - $ 50,000 deeq ah Gobolka Island loogu talagalay Daraasada Gaaritaanka Madaarka Whidbey. Daraasaddan suurtagalnimada waxay horumarin doontaa iswaafajinta fikradda ah ee waddo cusub oo loo maro Whidbey Airpark Industrial Area laga bilaabo SR 525. Lacagta CERB waxaa lagu waafajinayaa $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Pend Oreille - $ 50,000 oo deeq ah Magaalada Newport loogu talagalay Newport Hotel / Motel Feasibility Study. Daraasadani waxay falanqeyn doontaa baahida loo qabo hudheel / huteel, la ogaan doonaa cabbirka ku habboon, dhismaha iyo kharashyada hawlgalka, iyo shaqo abuurka Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
“Maalgashiga deegaanka ee bartilmaameedka ah ee xarumaha bulshada ayaa lagama maarmaan u ah dhismaha aasaas u ah kobaca dhaqaalaha ee guuleysta oo waara. Hadafka CERB waa inuu ka caawiyo dawladaha hoose iyo qabiilooyinka maalgelinta aragtidooda mustaqbalka, ”ayuu yidhi Guddoomiyaha CERB Randy Hayden.
Ku saabsan Guddiga Soo noolaynta Dhaqaalaha Bulshada (CERB)
Maaddaama ay tahay ilaha istiraatiijiga ah ee horumarinta dhaqaalaha Washington, CERB waxay diiradda saareysaa abuurista shaqooyinka shirkadaha gaarka loo leeyahay iyadoo lala kaashanayo dowladaha hoose iyadoo maalgelinaysa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Horumarintani waxay xoojineysaa bulshada iyadoo dhiirigelinaysa horumarinta ganacsiga cusub iyo ballaarinta. Marka lagu daro maalgelinta mashaariicda dhismaha, CERB waxay siisaa maalgelin xadidan daraasadaha qiimeeya mudnaanta sare leh mashaariicda horumarinta dhaqaalaha. Wax dheeri ah ka baro www.commerce.wa.gov/cerb.
Janea Delk, Agaasimaha Barnaamijka CERB & Xiriiriyaha Qabiilka, (360) 725-3151
FARXADguddiga dib u soo nooleynta dhaqaalaha bulshadaDeeqaha bulshada iyo amaahdahorumarinta dhaqaalahaWar-saxaafadeedXoojinta bulshadatechnologyWasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
← Samee Xiriirka Ganacsi ee Japan ee Seattle / Japan Tech Meetup 9.0 Luulyo 25 - Luulyo 27, Seattle Guddiga Howlaha Guud wuxuu ansaxiyay in ka badan $ 5.4 milyan oo deyn ah oo la siinayo bulshooyinka u baahan →